ဇာဘရွတ်ကဲန်မြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဇားလဲန်ဒ်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်တမ်းပလိတ်:SHORTDESC:ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဇားလဲန်ဒ်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်
၂၀၀၆-ခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှ ဇာဘရွတ်ကဲန်
Location of ဇာဘရွတ်ကဲန်မြို့ within Saarbrücken district
ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ မြေပုံကို ပြသရန်
Saarland၏ မြေပုံကို ပြသရန်
ကိုဩဒိနိတ်: Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:ISO 3166/data/DE' not found. 49°14′N 7°0′E﻿ / ﻿49.233°N 7.000°E﻿ / 49.233; 7.000ကိုဩဒိနိတ်: Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:ISO 3166/data/DE' not found. 49°14′N 7°0′E﻿ / ﻿49.233°N 7.000°E﻿ / 49.233; 7.000
၁၆၇.၀၇ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၆၄.၅၁ စတုရန်းမိုင်)
၂၃၀.၁ မီတာ (၇၅၄.၉ ပေ)
၁၁၀၀/km၂ (၂၈၀၀/sq mi)
ဇာဘရွတ်ကဲန်(အင်္ဂလိပ်: Saarbrücken; US: /zɑːrˈ-, ˈsɑːrbrʊkən, ˈzɑːr-/,; /sɑːrˈbrʊkən/,ဟုလည်း အသံထွက်) သည်ဂျာမနီနိုင်ငံ ဇားလဲန်ဒ်ပြည်နယ်(Saarland)၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီး၊ ပြည်နယ်၏ အကြီးဆုံးမြို့လည်းဖြစ်သည်။ ဂျာမန်အသံထွက်နှင့် အနီးစပ်ဆုံးမှာ ဇာဘွတ်(အ်)အဲန်(ဂျာမန်: [zaːɐ̯ˈbʁʏkn̩] ( နားဆင်))ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဇာဘရွတ်ကဲန်သည် ဇားလဲန်ဒ်ပြည်နယ်၏ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအချက်အချာနေရာဖြစ်ပြီး၊ ပြင်သစ်နယ်စပ်နှင့်ကပ်လျက် ရှိသည်။
ဇာဘရွတ်ကဲန်မြို့ကို ၁၉၀၉ ခုနှစ်တွင် ဇာဘရွတ်ကဲန်၊ စိန့်ဂျိုဟန်(St. Johann) နှင့် မားလ်စတပ်တ်-ဘားဘပ်ခ်(Malstatt-Burbach)ဟူသော မြို့ငယ်သုံးခုကို ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဇားကျောက်မီးသွေး ချိုင့်ဝှမ်း(Saar coal basin)၏ စက်မှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဗဟို ဖြစ်ခဲ့သည်။ သံ၊ သံမဏိ၊ သကြား၊ ဘီယာ၊ အိုး၊ အလင်းသုံးကိရိယာများ(optical instruments)၊ စက်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ ဤဒေသမှထွက်ရှိသည်။
မြို့၏သမိုင်းဝင်နေရာများမှာ ဇားမြစ် (Saar)ဖြတ် ကျောက်တံတား(၁၅၄၆)၊ အလယ်ခေတ်ဂေါ့သစ်(Gothic)လက်ရာ စိန့်အာနူယယ်(St. Arnual) ဘုရားကျောင်း၊ ၁၈ ရာစု ဇာဘရွတ်ကဲန်ရဲတိုက် (Saarbrücken Castle)နှင့် မြို့၏ရှေးဟောင်းအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော စိန့်ဂျိုဟန်ဈေး (Sankt Johanner Markt)တို့ ဖြစ်ကြသည်။
၃ ဇာဘရွတ်ကဲန်မြို့ရှိ မြင်ကွင်းများ
ဤဒေသရှိရာသီဥတုသည် အပူချိန်အမြင့်နှင့် အနိမ့်အကြား အနည်းငယ်သာ ကွဲပြားခြားနားပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုံလောက်သောမိုးရွာသွန်းမှု ရှိသည်။ ဤရာသီဥတုကို ကော့(ခ်)ပန်ရာသီဥတုခွဲခြားမှုစနစ် (Köppen climate classification)တွင် Cfb (သမုဒ္ဒရာ ရာသီဥတုဝင် အဏ္ဏဝါ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်း ရာသီဥတု - Marine West Coast Climate/Oceanic climate)ဟု သတ်မှတ်သည်။
ဇာဘရွတ်ကဲန် အတွက် ရာသီဥတု အချက်အလက်များ
44 77 119 171 201 214 234 212 153 100 48 34 ၁၆၀၇
Source #1: Wetterkontor
Source #2: Deutscher Wetterdienst World Weather Information Service
မြို့တော်ခန်းမ St. Johann
ကောလိပ်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း St. Arnual
ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း St. Nikolaus
တံတားဟောင်း (Alte Brücke)
မြို့တွင်းသုံး ဓာတ်ရထား(tramcar) သံလမ်း
↑ Euro District Saar-Moselle။
↑ Fläche, Bevölkerung in den Gemeinden am 30.06.2017 nach Geschlecht, Einwohner je km2und Anteil an der Gesamtbevölkerung (Basis Zensus 2011)။ 19 June 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2August 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Saarbrücken။ [[:en:Collins English Dictionary|]]။ [[:en:HarperCollins|]]။ 30 July 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Saarbrücken။ Merriam-Webster Dictionary။ 30 July 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Saarbrücken။ Oxford Dictionaries။ Oxford University Press။ 30 July 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Climate Summary for Saarbrücken from Weatherbase.com
↑ Klima Deutschland, Saarbrücken။ 22 June 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sonnenscheindauer: langjährige Mittelwerte 1981 – 2010။ 23 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 June 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Weather Information for Saarbruecken။ World Meteorological Organization။ 30 June 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Population development of Saarbrücken(in German)
↑ Die Bevölkerung Saarbrückens im Jahr 2013။ Amt für Entwicklungsplanung, Statistik und Wahlen။ 29 July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဇာဘရွတ်ကဲန်မြို့&oldid=697590" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။